AnkerWork B600 webcam ho an'ny streaming sy telecommuting [Famerenana] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 01/05/2022 18:00 | General, hevitra
Anker dia manohy miasa amin'ny fanolorana safidy maro sy safidy amin'ny endrika kojakoja ho an'ny karazana mpampiasa rehetra, na amin'ny charger MagSafe, fitaovana ary mazava ho azy, miaraka amin'ny webcam, iray amin'ireo sampany izay mamirapiratra indrindra amin'ny safidy sy kalitao atolotr'izy ireo, Izany no antony hiverenantsika amin'ity indray mitoraka ity amin'ny vokatra amin'ity karazana ity.
Manadihady lalina ny webcam AnkerWork B600 izahay, fitaovana natao ho an'ny teleworking sy streaming, miaraka amin'ny hazavana, mikrô ary mpandahateny. Aza adino izany satria napetraka ho safidy mahaliana hanatsarana ny vokatrao.
3 Fametrahana sy rindrambaiko azo ovaina
4 amin’ny fampiasana andavanandro
Ity fakantsary Anker vaovao ity dia nandova an'io endrika mahitsizoro misy zorony boribory izay hitantsika amin'ny fitaovana teo aloha. Na dia marina aza fa, toy ny amin'ny sisa amin'ny "unboxing" an'i Anker, ny kalitao dia hita hatramin'ny fotoana voalohany amin'ny ambaratonga fananganana, na dia amin'ny fitaovana toy ny tariby aza. Manana ampahany aoriana izahay izay ahitana seranan-tsambo USB-C roa, ilaina amin'ny fampitana herinaratra sy sary, ary koa seranan-tsambo USB-A izay ho dock.. Amin'ny lafiny iray, vita amin'ny lamba ny manodidina, mba hamoahana tsara ny feon'ireo mpandahateny mitambatra.
Manana fototra finday izay ahafahantsika manitsy ny webcam ho eo an-tampon'ny efijery rehetra, ary isika koa dia afaka mifanentana amin'ny fototra ambany izay karazana fanohanana mahazatra ho an'ny finday na fakan-tsary, izanyIty no safidy nofidiko satria tsy hifandray maharitra amin'ny efijery aho.
Ny tapany anoloana dia natao ho an'ny jiro LED izay misokatra amin'ny savily ary miaro ny family. Eo amin'ny sisiny dia misy bokotra roa mikasika ny mikrô sy ny jiro, zavatra azontsika fehezina amin'ny fampiharana ihany koa.
Ity fakantsary ity dia mananan 2K famaha vahaolana ambony indrindra na dia afaka manitsy izany araka ny filantsika aza isika, eny, miaraka amin'ny fahaiza-manao 30 sary isan-tsegondra, na dia tsy hoe mila miasa na mikoriana bebe kokoa aza isika. Ny haben'ny sensor dia 1 / 2.8 santimetatra ary manana rafitra fampandrenesana mandeha ho azy, rafitra fandanjalanjana fotsy mandeha ho azy, fifantohana mandeha ho azy ary asa fitadiavana olona sy fanaraha-maso, tsy misy na inona na inona.
Etsy ankilany manana isika mikrô bidirectional efatra miaraka amin'ny mpandahateny roa amin'ny 2W tsirairay avy mba hanolotra feo stereo mazava raha resaka resaka, miaraka amin'ny Auto Echo Fanafoanana avokoa ary mazava ho azy ny fanafoanana feo ho an'ny antso, ka ny feo ihany no heno. Manatsoaka hevitra izahay fa ity AnkerWork B600 ity dia ampy fitaovana amin'ny sehatra ara-teknika, na dia hiresaka momba ny zava-bitany amin'ny fotoana tena izy aza isika any aoriana.
Fametrahana sy rindrambaiko azo ovaina
Raha ny tena izy, ity Anker AnkerWork B600 ity dia Plug & Play, izany no tiako holazaina fa raha tsy amin'ny alàlan'ny fampifandraisana azy amin'ny seranana fotsiny dia hiasa tsara izy io USB-C avy amin'ny solosainay. Tokony ho ampy ho an'ny androntsika isan'andro ny rafitra faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fahaizany autofocus. Na izany aza, zava-dehibe ny fananana rindrambaiko fanohanana, amin'ity tranga ity dia resahina AnkerWork Azonao atao ny misintona maimaimpoana, ao no ahitantsika safidy maro, fa ny tena zava-dehibe dia ny mety hanavao ny rindrambaiko webcam ary hanalava ny fanohanany.
Ao amin'ity rindrambaiko ity afaka manamboatra ny zoro fijerena telo izahay 68º, 78º ary 95º, ary koa ny fisafidianana ny toetra telo hisamborana ny fanapahan-kevitra isan-karazany mandalo ny mety hanitsiana ny FPS, mampihetsika sy manafoana ny fifantohana, ny HDR ary a Fiasan'ny Anti-Flicker Tena mahaliana rehefa hazavain'ny jiro LED isika, fantatrao fa amin'ireo tranga ireo dia miseho matetika ny flickers izay mety hanelingelina, zavatra izay hohalavirintsika indrindra. Na eo aza ny zava-drehetra, dia hanana maody default telo isika miankina amin'ny filantsika izay amin'ny teoria dia mahazo tombony betsaka amin'ny AnkerWork B600 Anker.
Manoro hevitra anao izahay raha nanapa-kevitra momba ity fakantsary ity ianao azo jerena ao amin'ny tranokala Anker sy Amazon, fa maika ianao hametraka Anker Work ary manararaotra manavao ny firmware amin'ny fakantsary.
amin’ny fampiasana andavanandro
Ity fakantsary ity dia nahazo loka roa tamin'ny CES 2022 ary izany indrindra dia satria miatrika "All-in-One" isika, fitaovana afaka mampihena ny isan'ny "clunkers" ananantsika eo amin'ny biraontsika noho ny fampivondronana azy rehetra. tokana tokana. Ankoatra izany, miasa tsara amin'ny sehatra rehetra izy io, amin'izany fomba izany, Lasa fakan-tsary mahazatra ho an'ny iPhone News Podcast isan-kerinandro izay izarantsika vaovao momba ny zava-mitranga ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny teknolojia amin'ny ankapobeny.
Teo no nanehoany ny fahaiza-manaony, indrindra noho ny rafitra jiro LED ahafahantsika mahazo diplaoma eo anelanelan'ny feo mangatsiaka sy mafana, satria ity vao noresahintsika ity no hany singa jiro ampiasaina.
Ny fakan-tsary dia manana VoiceRadar Raha toa ka manapa-kevitra ny hampiasa ny mikrôfony izahay, dia tsy inona izany fa rafitra fanafoanana ny tabataba ivelany izay manazava ny fanatanterahana ny antso ary amin'ny fitsapana ataonay dia hita fa tena mandaitra amin'ny fanafoanana ny tabataba any ambadika ary mifantoka amin'ny mpifanandrina fotsiny. .
Ankoatra izany, ny fakan-tsary dia manana ny rafitra frame ihany, izay tsy inona fa fanaraha-maso manokana an'ilay olona, ​​ka mitazona azy ireo ho eo aloha. Tamin'ny fitsapana nataonay dia hita fa tena mahomby izy io na eo amin'ny sehatry ny fifantohana na amin'ny fanaraha-maso azy manokana, zavatra tsikaritray tamin'ny fivoaran'ny asa.
azonao atao amin'ny AnkerWork B600 manomboka amin'ny 229 euros amin'ny tranokala Anker, na mivantana amin'ny alàlan'ny Amazon, na dia ho hitanao amin'ny toerana fivarotana mahazatra ihany koa aza.
Amin'izany fomba izany dia napetraka ho iray amin'ireo fakan-tsary All-in-One feno sy azo ampiasaina indrindra eny an-tsena ary ao amin'ny Actualidad Gadget dia tsy afaka manao na inona na inona afa-tsy ny manoro azy izahay.
Navoaka tamin'ny: May 1 amin'ny 2022
Fanovana farany: May 1 amin'ny 2022
Versatility sy endri-javatra
Tokony ahitana kickstand
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » AnkerWork B600 webcam ho an'ny streaming sy telecommuting [Famerenana]